Xagaagan wuxuu ahaa kii labaad ee ugu kululaa Spain | Saadaasha Shabakadda
Xagaagan wuxuu ahaa kii labaad ee ugu kululaa Spain
Shalay, Jimce, Sebtember 22, xilligii xagaaga ayaa dhammaaday. Wakaaladda saadaasha hawada ee gobolka, Aemet, ayaa iftiimisay inay ahayd xagaagii labaad ee ugu kulushahay Spain. Tan iyo markii diiwaanka la bilaabay, kaliya 2003 waxaa loo soo bandhigay xagaaga ugu kulul dalka. Celceliska heerkulka waddanku wuxuu ahaa 25ºC. In kasta oo adduunka, sida had iyo jeer, xogtu ka duwan tahay, celceliska heerkulka sanadkan wuxuu ahaa 24,7ºC. Tani waxay ka dhigan tahay in celceliska uu ka sarreeyay 1ºC marka loo eego xagaagii hore intii u dhaxeysay 6 iyo 1981.
Maskaxda ku hay in qiimaha adduunka uu ka duwan yahay maxaa yeelay waxay ka tirsan yihiin gobollo kala duwan. Haddii kale, xagaaga oo lagu daray "qiimeynta" sidoo kale waa kuwa ugu kulul adduunka oo dhan. Waxay xitaa dhaaftay qiyamkii 2015 iyo kan aadka u sareeya ee 2016, wax si qoto dheer u hooseeya, lama fileynin inay dhacaan. Ka dib markii ka diiran xagaaga caadiga ah, dayrta waxaa loo soo bandhigay inay tahay mid ka mid ah kuwa ugu kulul.
Dib u eegis ku saabsan sida meerkuriga heerkulbeegyadu u falgalay
Horeba bilowga, gudaha Juun, waxay bilaabatay inay tahay bishii ugu kululayd tan iyo 1965. Iyada oo celcelis ahaan heerkulka 3ºC uu ka sarreeyo celceliska bishaan tan iyo bilowgii diiwaanada. Julaay iyo Agoosto sidoo kale way ka kululaayeen sida caadiga ah, heerkulka 0 iyo 9ºC ayaa ka sarreeya celceliska, siday u kala horreeyaan.
Qeybta koonfureed ee dalka, waxaa laga diiwaan geliyay heerkulka. Kuleylka daran ee garoonka diyaaradaha Córdoba oo wata 46ºC ayaa ahaa kii ugu sareeyay. 9ºC garoonka diyaaradaha Granada ama 45ºC waxay gaareen Jaén. Kuwani waa qaar ka mid ah diiwaanka diiwaanka, marka lagu daro mowjadaha kuleylka ee xoogga leh, halkaasoo dhowr degmo ay diiwaangeliyeen heerkul ka sarreeya 7ºC maalmo isku xiga.
Iyadoo ay taasi jirto, dhinaca roobka, waxaan ka hadli karnaa xagaa "qoyan". Iyadoo celcelis ahaan roobab ka da'een Spain of 79 litir halkii mitir oo laba jibbaaran, ayaa 7% ka sarreeya celceliska jira.
Waxaan rajeyneynaa in xilliga dayrta uu noqon doono mid qoyan, maxaa yeelay isku dheelitirka sanadlaha ah waa jawaan ka badan celceliska, 12% ka hooseeya. Iyo heerkulka, oo la filayo inuu u dhexeeyo 0 iyo 5ºC celcelis ahaan.
Wadada buuxda ee maqaalka: Saadaasha Shabakadda » Saadaasha Shabakadda » Saadaalin » Xagaagan wuxuu ahaa kii labaad ee ugu kululaa Spain